NGABA UMCULO KWI-ISLAM UTHINTELWE? - INYANI.COM - YOGA-YOKOMOYA
Ngaba umculo kwi-Islam uthintelwe?
Ekhaya Yokomoya yeYoga Inkolelo eyimfihlakalo Ukholo Mysticism oi-Iram Zaz Ngu Iram zaz | Ipapashwe: NgoLwesithathu, nge-9 kaDisemba ngo-2015, ngo-14: 00 [IST]
Ngaba umculo uvumelekile ukuba ungene inkolo yamaSilamsi ? Umculo walo naluphi na uhlobo nguHaram (akuvumelekanga) kwi-Islam. Kuyatshiwo ukuba umculo ukususa ku-Allah, nanjengoko umntu omamele umculo esiba nomdla kwisingqisho sakhe sokuba alibale yonke into.
Nawuphi na umculo odlalwe ngendlela yokulukuhla unokutsala iimvakalelo zakho kumacala ahlukeneyo kwaye unokuba ubhekise kwizono ezithile, ezinje ngesondo ngokungekho mthethweni okanye ukungathembeki.
Onke amaSilamsi Kufuneka bayeke ukuzibandakanya emculweni kakhulu, ukuze bangalibali umdali wabo. Nangona kunjalo, amaSilamsi anamhlanje amamela zonke iintlobo zomculo. Baphulaphula umculo ongxolayo nokuba lixesha lokuthandaza, nelithathwa njengeliphosakeleyo e-Islam.
Oku kunokubonakala kuyinto eqhelekileyo kwabanye, kodwa ukwenza nantoni na egqithileyo kunokukhokelela kwiimpembelelo ezimbi. Ukuba umamele umculo kwaye uqhagamshele kwilizwe lokwenyani, imeko inokwahluka ngelo xesha. Nangona kunjalo, kuya kufuneka ukuba ubone abantu abathile behlunguzela iintloko zabo kunye nomzimba, njengoko bebandakanyeka kumculo othile. Oku akwamkelekanga kwi-Islam.
Umculo Nokuba uphazamisekile iNgcwele yamaHindu
Nokuba kubuHindu, njengebali, ingcwele yayiphazanyiswa yintombazana edanisayo xa yayithandaza ngelixa ivala amehlo. Intombazana leyo yamphazamisa ngomculo kunye nomngqungqo kwaye ke yonke imizamo yakhe yomthandazo yonakala.
Umculo Unokukwenza Uxhalabe
Kutheni umculo ungavumelekanga kwi-Islam? Ukumamela umculo kunokuyiphumza ingqondo, kodwa, kwangaxeshanye, kunokukhokelela kuphazamiseko lwengqondo kunye neemvakalelo zoxinzelelo ngakumbi xa ucima isidlali somculo. Wakhe wayiqaphela lonto? Umculo nawo uyanciphisa ukuvelisa, njengoko uthatha inxaxheba kuwo kunokugxila kumsebenzi wakho.
Kutheni uMculo ungagunyaziswanga kwiindawo zomsebenzi
Ukuthintelwa komculo kwiindawo zomsebenzi kukodwa kububungqina bokuba umculo uyawuphazamisa umsebenzi kwaye wenza imeko-bume engenampilo. Khawufane ucinge ukuba umculo wenziwe ngokusemthethweni kuyo yonke indawo, beliza kuba njani ilizwe? Esi sisizathu esihle sokuba umculo ube yiHaram kwi-Islam.
Ukudanisa kunye noMculo
Ukudanisa akuvunyelwanga kwi-Islam, njengoko kutsala abantu besini esahlukileyo kwaye kunokukhokelela kububi ekuhlaleni. Umdaniso oqhutywa ngamantombazana unokubangela ukuba amadoda abandakanyeke ngokwesondo kunye nawo. Olu tyekelo lomntu kwaye akukho mntu unokuyiphika inyani. Ke ngoko, esi sisizathu sokuba umculo kunye nomngqungqo ungavumelekanga kwi-Islam.
ezona zincedisi zeoyile zentlanzi india
umbala wesafron kwiflegi yelizwe ubonakalisa
singathambisa ioyile yealmondi ebusweni
indlela yokulahla amanqaku olula kwibham yakho
izinto zokuhombisa ezenziwe kwimpahla yenkunkuma